Atụmatụ na ahịa ịntanetị | ECommerce ozi ọma
N'ụzọ dị mma, e nwere ọtụtụ ụzọ isi nwekwuo ahịa na ntanetị, ọtụtụ n'ime ha nwere ike mejuputa ya ozugbo. Offọdụ n'ime ndụmọdụ ndị a na-elekwasị anya na atụmatụ akọwapụtara nke ị nwere ike itinye, ebe ndị ọzọ na-ahụkarị. Na nke a, anyị ga-atụle ọtụtụ atụmatụ dị otú a, yabụ ma ị na-ere ngwaahịa ma ọ bụ na-azụ ahịa azụmaahịa.
Na-eme ihe n'eziokwu na akwụkwọ ahịa gị. Nke a nwere ike iyi ihe doro anya doro anya, mana ọ na-eju m anya ole saịtị dere akwụkwọ nyocha na ngwaahịa ha enweghị ike ị nweta ego. Ime ihe n'eziokwu na copomie abụghị naanị ihe dị oké mkpa maka aha azụmahịa gị, mana ọ na-akwalite ma na-agba ume ntụkwasị obi na akara gị. Emela nkwupụta na ị nweghị ike igosi ma ghara iji hyperbole mee ihe - ndị na-azụ ahịa taa na-eme ka ihe efu ghara ịzụ ahịa, yabụ mee ihe n'eziokwu, kwụ ọtọ ma nweta ya na ụdị ahịa gị niile, site na peeji nke ụlọ gị na mkpọsa email gị.
Principlekpụrụ a metụtakwara etu i si nọrọ onwe gị dịka ụlọ ọrụ. Nwetụla mgbe ị gafere saịtị nke otu onye ma ọ bụ mmadụ abụọ na-agba ọsọ, mana na-egosipụta otu oyiri nke ga-adaba adaba maka ụlọ ọrụ mba dị iche iche? Approachzọ a anaghị eme ka ị dị nzuzu, ọ na-emebi ntụkwasị obi gị. Ọ bụrụ na ị bụ obere azụmaahịa, were ya na-ekwu okwu n'ezoghị ọnụ - ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-echigharịkwuru obere azụmaahịa n'ihi ọrụ ndị ọzọ dị iche iche na nke ha nwere ike ịnye. Anwala ịbụ ihe ị na-abụghị.
1 Nweta mgbasa ozi ndị ọzọ
2 Nkwupụta ndị ahịa dị ugbu a
3 Mepụta echiche nke ịdị ngwa
4 Nye ole na ole nhọrọ
5 Zube ndị yiri ya na Facebook
6 Bibie peeji nke ọdịda gị
7 Gbalịa Mgbasa ozi Gmail
8 Nye ihe niile i nwere ike n’efu
Nweta mgbasa ozi ndị ọzọ
Ọ bụrụ na ị na-ere ihe na ntanetị, mgbasa ozi anaghị adị mfe - atụmatụ a (nke dị na AdWords na Bing) na-enye gị ohere ịme ka mgbasa ozi gị buru ibu karịa iji pịa ọtụtụ ebe. Ma ọ na-efu ihe ọ bụla ọzọ! Mee ka ịpị-pịa ọnụego nke mgbasa ozi gị! Apụghị ikweta eziokwu?
Mụbaa Ahịa N'ịntanetị Site na Iji Mgbatị Mgbasa Ozi
N'ihe atụ dị n'elu, njikọ nke "Ugogbe anwụ nwoke" na "Ugogbe anwụ maka ụmụ nwanyị" na-enye ndị mmadụ ịchọ ịzụrụ ụzọ ọhụụ Ray-Ban abụọ ọzọ iji pịa. Nke a na - echekwa atụmanya ahụ ma mee ka ọ dị mfe na ngwa ngwa ịchọta kpọmkwem ihe ha chọrọ (yabụ ha gafere na saịtị gị kama nke asọmpi ahụ).
Nkwupụta ndị ahịa dị ugbu a
N'ebe mgbasa ozi mgbasa ozi nke oge a, nzaghachi ndị ahịa adịtụbeghị mkpa. Ọ dabara nke ọma, nke a pụtara na ndị ahịa gị nwere afọ ojuju nwere ike inye gị otu n’ime ngwa ọgụ kachasị baa uru na ngwa agha ha: nleba anya.
Mụbaa na ire ahịa na ntanetị gụnyere Akaebe Ndị Ahịa
Legions nke afọ ojuju ahịa bụ nke ukwu mmetụta karịa ọbụna ndị kasị mma ahịa oyiri, ya mere kpachara anya na-agụnye testimonials na reviews gị ika ozioma ndị na-ekwu okwu nke otú egwu ị bụ. Ndị a nwere ike ịpụta na peeji nke ngwaahịa gị, peeji nke ọdịda, ibe ọnụahịa, ọbụlagodi ibe obibi gị. Maka ama ndị ọzọ, lelee edemede m na ike nke akaebe ndị ahịa.
N'otu aka ahụ, ntinye nke akara ntụkwasị obi nwere ike ịbụ nnukwu ụzọ iji bulie ahịa n'ịntanetị, ebe ọ na -emepụta echiche dị mma banyere akara gị n'uche nke atụmanya ahụ ma nwee ike ịmalite inwe obi abụọ. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị nwere nzere ntozu ọkachamara ọ bụla (ọbụlagodi ihe dị ka ihe omume dị ka asambodo sitere na Ọfịs Ezigbo Azụmaahịa ma ọ bụ ndị otu na mpaghara azụmahịa gị), tinye akara ntụkwasị obi ndị a n'ihu na etiti saịtị gị. Y’oburu n’inwe otutu ndi ahia gi juru aju, dikwa n’aka na ndi ahia gi mara ya.
Mepụta echiche nke ịdị ngwa
Ọ dị mkpa iji eziokwu na nghọta mee ihe banyere onye ị bụ na ihe ị na-eme, mana enweghị iwu na-egbochi gị ịmepụta echiche nke ịdị ngwa iji kwenye ndị ahịa nwere ike ịzụta n'aka gị ugbu a.
Dịkwuo ahịa ịntanetị site na ịmepụta echiche nke ịdị ngwa
Ọtụtụ ndị na-azụ ahịa na-emeghachi omume n'ụzọ dị mma na mkpali ndị na-eme ka echiche nke ịdị ngwa, site na onyinye pụrụ iche nke oge dị mkpụmkpụ, na ngwaahịa ndị nwere oke. Ọ bụ ezie na ụzọ isi mee nke a dị iche iche dịka ngwaahịa ndị enwere ike ịzụta n'ịntanetị, ụfọdụ atụmatụ nwere ike ịdị irè karịa ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnweghị (ma ọ bụ na ịnweghị ike) ịme ngwaahịa nwere oke oke iji dọta atụmanya, ikekwe ị nwere ike ịnye ndị ahịa na-eme ego ịzụta ihe ozugbo, dị ka mbupu n'efu ma ọ bụ nwepu ego.
Dịkwuo ahịa gị na ntanetị site na iji ndị mgbasa ozi mgbasa ozi. Zọ ọ bụla ị kpebiri ịme ya, ịmepụta echiche nke ịdị ngwa bụ ụzọ dị mma iji mụbaa ahịa n'ịntanetị.
Nyeghachi ego ịkwụ ụgwọ
Ọtụtụ mgbe, otu n'ime ihe kachasị ike na mkpebi nke ndị na-eri ere ịghara ịzụta ihe bụ izere ihe ize ndụ - ọchịchọ nke izere ọnwụ. Ọtụtụ mgbe, ihe ae chere na ọ bụ gbasara ego bụ ego. Kedu ihe kpatara mmadụ ga - eji zụrụ ngwaahịa gị? Gịnị ma ọ bụrụ na ha anaghị arụ ọrụ, ma ọ bụ ndị ahịa anaghị amasị ha? Ọbụna obere ịzụrụ ihe nwere ike ibute ihe egwu nke "ịkwa ụta nke ndị zụrụ ahịa," n'ihi ya, a ga-emerịrị mmegide a n'ihu n'ihu site na ịnye nkwa nkwụghachi ego na-enweghị mgbagha.
Ka ị na-ewepụkwu ihe ịchọrọ na mkpebi nke atụmanya ahụ, ọ ga-adịrị ha mfe ịzụta n'aka gị, yabụ wepụ ihe ọ bụla nwere ike igbochi atụmanya ịzụrụ.
Nye ole na ole nhọrọ
Maka ọtụtụ ụlọ ọrụ, echiche a bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche. N’ezie ịnyekwu ngwaahịa bụ ụzọ dị mma iji nwekwuo ahịa! Ọfọn, ọ bụchaghị. N'ezie, n'ọtụtụ ọnọdụ, nhọrọ dị iche iche dị iche iche nwere ike ibute mkpebi na atụmanya ahụ, nke na-ebute ahịa furu efu.
Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ngwaahịa, tụlee ịhazi saịtị gị ma ọ bụ ibe ngwaahịa n'ụzọ ga-enye ndị ọbịa obere nhọrọ dịka o kwere mee. Nke a na-ebelata ohere nke ọtụtụ ngwaahịa dị iche iche ga-eri ọbịa ahụ. Enwere ike ime nke a site na ịhazi ngwaahịa gị ka ọ dị warara ma dị warara (uru agbakwunyere bụ na ọ na-eme ka ọ dịrị ndị ọbịa mfe ịchọta ihe ha na-achọ), ma ọ bụ ịnwere ike itinye nnukwu ngwaahịa na ngwaahịa ole na ole. N'ọnọdụ ọ bụla, cheta na nhọrọ ndị ọzọ ị na-enye, o yikarịrị ka onye ahịa ọ ga-aga ebe ọzọ.
Zube ndị yiri ya na Facebook
Otu ụzọ kachasị mma iji bulie ahịa n'ịntanetị bụ iji data ị nwere gbasara ndị ahịa gị ugbu a ịchọta ndị dị ka ha. Facebook na - enye gị ohere ịme nke a site na ị na - ele ndị na - ele anya.
Mee ka ndị na-ere ahịa na ntanetị dịkwuo iche iche na Facebook. Ndị na-ege ntị na Facebook bụ ndị ọrụ Facebook ndị na-ekerịta njirimara na omume na ndị ahịa na nchekwa data gị. Upload na-ebugo data gị na Facebook, nke na-agafe data gị (na ozi sitere n'aka ndị na-ere ahịa data atọ) iji mepụta egwuregwu dabere na njirisi ị kwupụtara. I nwekwara ike iji pikselụ nsuso na ngwa wụnye data iji nyere gị aka ịmepụta ndị na-ahụ anya. Nke a bụ ụzọ dị mma iji tinye data ndị ahịa gị ugbu a ka ọ rụọ ọrụ maka gị, na-enye gị ohere ịgbasawanye nnweta gị yana obere mbọ ma jiri mgbasa ozi ezubere iche iji dọta ndị ọrụ Facebook ndị yiri ndị ahịa gị ugbu a.
Asingbawanye ahịa n'ịntanetị na-alụso ịgbahapụ ụgbọ ibu azụmahịa. Yiri ihe dị n'elu gbasara ahụmịhe onye ọrụ, ibelata esemokwu na usoro ndenye ọpụpụ nwere ike inwe mmetụta dị ịtụnanya na ọnụego mgbanwe gị. N'otu ụzọ ahụ ọ ga - eme ka ọ dị mfe ka ọ kwe omume maka ndị ọbịa ị jiri na ịnyagharịa saịtị gị, ị kwesịrị ime ka ọ dịrị ha mfe ịzụta ihe ị na - ere.
Wepụ usoro ọ bụla na-enweghị isi n'ịzụ ahịa gị nke nwere ike imebi atụmanya ịtụgharị. Mafere ubi na-enweghị isi na ụdị. Egbula oge ha ma mee ka ha bido site na mbido. Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ maka otu ị ga - esi merie ịgbahapụ ịzụ ahịa ịzụ ahịa.
Dịkwuo online ahịa na-anabata iche iche nke ịkwụ ụgwọ
Ndị ahịa nwere nhọrọ karịa mgbe ọ bụla ọzọ na etu ha si akwụ ụgwọ maka ngwa ahịa na ọrụ, ọ bụghị mmadụ niile na-ahọrọ iji American Express. Site na ịnyekwu nhọrọ ịkwụ ụgwọ, gụnyere ọrụ ọhụrụ ndị na-ewu ewu na mkpanaka, ị na-eme ka ọ dịkwuoro ndị ahịa mfe inye gị ego ha. N'ezie, ọ nwere ike ịbụ nsogbu iji bulie saịtị gị (yana usoro ndenye ọpụpụ, dị ka anyị tụlere n'elu) iji tinye nhọrọ ndị a niile, mana ịme nke a bụ ụzọ dị mma iji bulie ahịa n'ịntanetị, ọkachasị ma ọ bụrụ na saịtị gị nwere nnukwu okporo ụzọ mkpanaka. ...
Tinye ego na onyonyo ngwaahịa dị mma
Enwere ihe akaebe gbara ọkpụrụkpụ na-egosi na nri na-atọ ụtọ nke ọma dị ụtọ karịa efere a kụrụ akpụ. N'iburu mkpa ọdịdị dị na otu anyị si aghọta ihe (gụnyere ndị ọzọ), ọ pụtara na itinye ego na foto ngwaahịa dị mma nwere mmetụta yiri nke ndị ọbịa na saịtị gị.
Bibie peeji nke ọdịda gị
Anyị ekwuola atụmatụ a na mbụ, ọ na - ewetakwa karịa nku anya ole na ole, ikwu opekata mpe. Agbanyeghị, anyị anaghị akwado iwepụ peeji nke ọdịda na-enweghị isi, kama na -echekwa mgbasa ozi ịntanetị gị iji kwado ọnụ ọgụgụ ndị na-azụ ahịa na-agagharị na ntanetị n'ịntanetị.
Mee ka ahịa dị n'ịntanetị jiri Facebook 'pịa ịkpọ' mgbasa ozi. Kpọọ-naanị mkpọsa na Facebook na AdWords bụ ezigbo ihe atụ nke ọnọdụ ebe iwepụ peeji nke ọdịda ọdịnala na-eme ka uche zuru oke. Imirikiti ndị mmadụ achọghị iji ọtụtụ nkeji na-eme nchọgharị na peeji nke na ha mobile ngwaọrụ, ha dị nnọọ chọrọ inwe na aka gị azụmahịa.
Mee ka mgbasa ozi AdWords na-akpọ ntanetị n'ịntanetị. Site na iji naanị mgbasa ozi na-akpọ, ị na-eme ka ọ dịkwuoro ndị ahịa mfe ịkpọtụrụ azụmahịa gị, na-ewepụ kpamkpam otu n'ime usoro siri ike nke kpochapụwo ntanetị n'ịntanetị, yana nwere ike ịbawanye olu nke oku na azụmahịa gị, otu n'ime ihe kachasị bara uru nke kọntaktị maka ọtụtụ ụlọ ọrụ. Ndị na-akpọ gị na-arịọsi arịrịọ ike ka ịre ha ihe.
Gbalịa Mgbasa ozi Gmail
Mgbe afọ ole na ole nọ na nke beta, mgbasa ozi Gmail na-adịkarị maka onye ọ bụla. Nke a bụ ụzọ na-enye obi ụtọ iji ruo atụmanya ma bulie ahịa.
Dịkwuo Mgbasa Ozi Onlinentanetị n'iji Mgbasa ozi Gmail. Ọ bụrụ na ị na-agakwuru ndị ahịa mgbe ha na-achọ na mgbe ha na-eme nchọgharị na netwọk mmekọrịta, gịnị ma ị gaa karịa ma tie ha aka mgbe ha nọ igbe ozi ha, kwa? Otu ụzọ dị irè iji jiri mgbasa ozi Gmail bụ ịmebanye isiokwu nke onye na-asọ gị. Ndị mmadụ nọ n'ahịa maka ngwaahịa ndị na-asọmpi gị na-enweta ozi ịntanetị n'aka ndị asọmpi gị na-akpọ aha akara aha gị ugbu a. Site na idenye okwu ndị ahụ, ị ​​nwere ike igosi n'ime igbe igbe ha ma nwee olile anya na ha ga-agbanwe obi ha.
Nọgide na-enwe usoro izi ozi n'ofe mkpọsa na saịtị gị
You nwetụla mgbe ịpịrị mgbasa ozi PPC nke jidere anya gị, naanị ka a kpọga gị na peeji nke ọdịda na-adịghị mkpa (ọjọọ) ma ọ bụ isi peeji nke saịtị ahụ (ka njọ)? You kwụsịrị ịzụ ihe ị na-achọ site na saịtị ahụ? Eleghị anya ọ bụghị.
Dịkwuo online ahịa ozi kenha. Ngosipụta mgbasa ozi nke Air Canada, yana mgbakwunye ya.
Mụbaa Ozi Mgbasa Ozi N'ịntanetị
Ọ bụrụ na onye ọrụ pịa na mgbasa ozi maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ụfọdụ, ibe ha na-aga kwesịrị ịbụ maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ahụ akọwapụtara, ọ bụghị ụdị metụtara ya, ma ọ bụ onyinye pụrụ iche maka ngwaahịa ọzọ, mana ngwaahịa ahụ akọwapụtara. Gbaa mbọ hụ na ozi gị bara uru na mkpọsa mmekọrịta mmadụ na ibe ya yana ibe metụtara ha, ka mgbasa ozi pịa ahịa.
Zaa ajụjụ ọ bụla ma kwue okwu ọ bụla na-egbochi gị
Otu n'ime ọnyà ndị kachasị dị ize ndụ ị nwere ike ịdaba mgbe ị na-achọ ịre n'onlinentanet bụ echiche banyere ndị ahịa gị nwere ike ịma maka ngwaahịa, ọrụ, ma ọ bụ ahịa gị. Ọtụtụ ụlọ ọrụ kwenyere na ndị ahịa ha maara nke ọma banyere ihe ha na-ere karịa ka ha na-eme n'ezie, na-eduga ajụjụ na azịza a na-azaghị, nke nwere ike imerụ ahịa ahụ.
Tụlee ajụjụ niile na-adakwasị gị gbasara ngwaahịa gị, ma zaa ha na kọọpị gị na ibe ngwaahịa gị. N'otu aka ahụ, chee echiche ọ bụla ndị mmadụ nwere ike ịjụ maka ihe ị ga-achọ, ma jiri nke aka gị merie ha. Nke a nwere ike iyi ihe agaghị ekwe omume, mana cheta na ị naghị atụfu atụmanya na-enweghị isi banyere ozi na-enweghị isi, ị na-enye ha ihe ha chọrọ iji mee mkpebi doro anya. Approachzọ a bụkwa ihe omume magburu onwe ya maka ide ederede, nke doro anya, ma dị nkenke. Ọ bụrụ n ’ọ na-eche gị na enwere nnomi buru ibu, ị nwere ike belata ya oge niile. Naanị lekwasị anya na ndị ahịa na otu ọ si abara ha uru, ọ bụghị ihe kpatara ụlọ ọrụ gị ji adọrọ mmasị.
Nye ihe niile i nwere ike n’efu
Ndị mmadụ hụrụ ihe efu n'anya, ma ka ị na-enyefe, ndị ahịa nwere ike ịlele gị na akara gị, nke nwere ike ibute ịre ahịa n'ịntanetị. Dịkwuo ahịa n'ịntanetị site n'inye ihe n'efu. Kemmasi!
Lelee onyinye gị ugbu a. Nwere ike inye ihe n'efu? Y’oburu n’inwe azumahia software dika anyi di, o di nfe inye onyinye nke komputa software gi. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị, ị nwere ike ịnye onyinye, nnwale nnwale, onyinye abụọ maka otu, na ihe mgbakwunye ndị ọzọ na-akwụ ụgwọ. Inye ihe n’efu abughi nani uzo di nma iji me ka ndi mmadu mara banyere ahia gi, kamakwa o bu oke uzo iji mee ka ha mata ihe ị gha agha ma rata ha ka ha zuta.
Mepụta ma jikwaa ihe odide ịzụ ahịa zuru ezu
Aga m aga n'ihu wee chee na ị mepụtala ihe ịsị ahịa (n'ihi na ọ bụrụ na i meghị ya, ị nọ n'ezi nsogbu), mana m ga-ama gị aka ka ị mepụta ihe ederede zuru ezu karịa na gara aga. O doro anya na ọ ga-abara gị uru na mmemme gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » Atụmatụ na ahịa ịntanetị
Kedu otu esi emepụta azụmaahịa dijitalụ nke gị nke ọma